Holly Fulton နဲ့ River Island တို့ရဲ့ Collaboration – FemaleWear.net
High-street brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ River Island နဲ့ latest designer တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Holly Fulton တို့ဟာ luxury collaboration တစ်ခုကို မကြာခင်ကဘဲ ထုတ်လုပ်ဖို့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ London Fashion Week မှာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကတည်းက ပြသခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ Design တွေဟာ အရမ်းနာမည်ကြီးပြီး လူကြိုက်များလာခဲ့ပါတယ်။
Excited to Announce our collaboration with @riverisland on today’s @britishvogue. The 13 piece collection, launching in February is strewn with magpie embellishments and references Fulton favourites, party girls and pop’. #HollyFulton #PerfectPartyDress #Embellishment #Sparkle #Print #Roses #Crystal
A post shared by Holly Fulton (@studio_fulton) on Jan 5, 2018 at 7:50am PST
အခုထုတ်လုပ်မယ့်ဒီဇိုင်းလေးတွေကိုလည်း သူမရဲ့ Instagram မှာ ပုံဆွဲပြီးတင်ထားတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ လက်ဝက်ရတနာတွေနဲ့ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်လို့ရမယ့် Jacket တွေ၊ sequinned dress တွေ နဲ့ bodysuit တွေကို ထုတ်လုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်။ စျေးနှုန်းတွေကတော့ $25 ကနေ $ 400 ကြားလောက်ဖြစ်ပါမယ်တဲ့…
River Island နဲ့ collaboration လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ သူတွေကတော့ Ashish, Eudon Choi and Katie Eary တို့ဖြစ်ပါတယ်။
???????? #hollyfulton #SS18 @johnsmedleyknitwear
A post shared by Holly Fulton (@studio_fulton) on Sep 18, 2017 at 5:48am PDT
Tags: Collaboration, High-street brand, Holly Fulton, River Island
Meghan Markle ဝတ်ဆင်ခဲ့သော Fashion